तपाईं कसरी बेलायतमा शरणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ
नोभेम्बर 24, 2021 एन्टिका कुमारी शरणार्थीहरू, UK
यदि तपाईं युकेमा शरणार्थीको रूपमा बस्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले युकेमा शरण वा सुरक्षाको लागि आवेदन दिन आवश्यक छ। तपाईं योग्य हुन देश फर्कनुभएको थियो र फिर्ता जान इच्छुक हुनुहुन्न किनकि तपाईं हुनुहुन्छ
DR-कांगो को भिसाका लागि कसरी आवेदन गर्ने?
नोभेम्बर 23, 2021 एन्टिका कुमारी DR Congo, भिसा
कंगो को डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक मध्य अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो देश हो। DR-कांगोलाई कo्गो-किन्शासा पनि भनेर चिनिन्छ। यो मध्य अफ्रिका मा सबै भन्दा ठूलो देश हो। यद्यपि यो मध्य अफ्रिकामा छ, र यसमा सफारी सामानहरू हुनुपर्दछ। तर,
क्यानाडा को लागी भिसा मुक्त देशहरु
नोभेम्बर 22, 2021 मैत्री झा क्यानाडा, यात्रा, भिसा
भिसा बिना कनाडामा कतिवटा देश भ्रमण गर्न सकिन्छ? आफैलाई भाग्यवान ठान्नुहोस् यदि तपाईं क्यानाडाई राहदानी राख्नुहुन्छ भने! भिसा बिना, तपाईं १ 140० देशहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट पहिचानको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको फारम हो
«अघिल्लो पोष्टहरू 1234... 94 अर्को पोस्टहरू»